पेन ड्राइभ कन्सर्ट !- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
आयोजकले खर्च धाने मात्रै हामी म्युजिसियन लग्न सक्छौं । नत्र ट्रयाककै भर हो । - मिलन नेवार, गायिका
लाइभ गायनमा दर्शकलाई रियल टाइम म्युजिक सुनाउनुपर्छ । - नवीन के भट्टराई, गायक
ट्रयाक मात्रै होइन, पूरा गीतै बजाएर लिप सिंक गरेको पनि देख्छु । यसरी नै कति सर्भाइभ भइरहेका छन् । कलाकारले कलाको सम्मान त गर्नुपर्‍यो नि ! - दीप श्रेष्ठ, गायक
काठमाडौँ — अधिकांश नेपाली गायकगायिका सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि एक्लै स्टेजमा पुग्छन् । तिनका साथमा न वाद्यवादक हुन्छन्, न कुनै वाद्ययन्त्र । हुन्छ त केवल पेन ड्राइभ ! त्यो ड्राइभ प्राविधिकलाई थमाएपछि उनीहरू गाउन तम्तयार हुँदै भन्छन्, ‘ट्रयाक प्लिज ।’
कुनै गायकको लाइभ कन्सर्ट हेर्नुभएको छैन भने युटयुब नियाल्दा भयो । त्यहाँ उपलब्ध जति पनि ‘लाइभ पर्फमेन्स’ छन्, हाम्रा कलाकार ट्रयाकमै गाइरहेका देखिन्छन् । केहीले त आधाउधी गीत दर्शकलाई नै गाउन लगाएको समेत देखिन्छ । कोही ट्रयाकको सट्टा पूरा गीतै घन्काएर लिप सिंक गर्न भ्याउँछन् । विदेशी आर्टिस्टका प्रस्तुति हेर्दा भने माहोल बिलकुल फरक लाग्छ । भारतकै अरिजित सिंह, श्रेया घोसाल, नेहा कक्कर वा पाकिस्तानका आतिफ असलमहरू स्टेजमा कदापि एक्लै देखिँदैनन् । उनीहरू आफ्नो सांगीतिक दलबलसहित दर्शकश्रोतासामु उपस्थित हुन्छन् ।
नेपालमा कन्सर्टका लागि आएका आतिफ असलम, मिका सिंह, मोहित चौहानदेखि ब्रायन एडम्ससम्मले आफ्नो ब्यान्ड साथमा ल्याएका थिए । तर, हाम्रा कलाकार विदेश जाँदा त परको कुरा, बनेपाको कन्सर्टमा समेत एक्लै पुग्छन् । पेन ड्राइभ बोक्यो, हिँडयो । ब्यान्डसहित गाउने भए पूर्वाभ्यास गर्नुपथ्र्यो । तर, एक्लै भएकाले गायन होइन गेटअपका लागि पूर्वाभ्यास गरे पुग्छ ।
‘ट्रयाक सिस्टमका कारण सजिलो भएको छ,’ गायिका मिलन नेवारले भनिन्, ‘आयोजकले खर्च धान्न सके भने मात्रै हामी म्युजिसियन लग्न सक्छौं । नत्र ट्रयाककै भर हो ।’
कतिपय अग्रज स्रष्टाले ट्रयाक संस्कृतिको विरोध गर्दै आएका छन् । तिनले ट्रयाकमा गाउने चलनको खिसी गर्दा नयाँ पुस्ता ठुस्किने गरेको छ । ‘खै के बोल्नु र यसबारे,’ गायक दीप श्रेष्ठले भने, ‘रिसाउँछन् मसँग । हामीले कहिल्यै ट्रयाकमा गाएनौं । मजाले बाजा बजाएर गाए पो गायनको स्वाद आउँछ †’ ट्रयाकले लाइभ कन्सर्टको असली मिठास व्यक्त गर्न नसक्ने उनले बताए । ट्रयाक गायनलाई उनी खोक्रो प्रस्तुति मान्छन् ।
दीप कभर गाउने र ट्रयाकमा गाउनेलाई एउटै दर्जा दिन्छन् । रातारात हिरो हुन खोज्नेले मात्रै यस्तो गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार संगीतमा धैर्य चाहिन्छ । ‘गायकगायिकाले आयोजकलाई एक्लै गाउँदिनँ, वाद्यवादक राखिदेऊ भन्न सक्नुपर्छ,’ दीपको कुरा, ‘आज नमाल्लान् तर अर्को चोटि त मान्छन् नि † यसो गर्दा गायककै इज्जत बढ्छ ।’
नेपाली संगीत बजार सानो भएकाले ट्रयाकमा गाउनु बाध्यता भएको मिलनको अनुभव छ । उनी मौका मिल्दा वाद्यवादकसँगै उपस्थित हुन्छिन् । कहिलेकाहीँ आयोजकलाई वाद्यवादक उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने गरेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘उहाँहरूको पनि मजबुरी बुझिदिनुपर्छ । म्युजिसियन लग्दा खर्च बढ्छ । समय खर्च हुन्छ । ट्रयाक भए सजिलो । तर, लाइभ गाउनु मर्यादित हो । लाइभमै मज्जा हुन्छ ।’
२५ वर्षदेखि ट्रयाकमा गाउँदै आएका पप गायक धीरज राई पनि यो चलनप्रति खुसी छैनन् । उनलाई आफू कहिलेकाहीँ रोबोट बनेजस्तो लाग्छ । ‘ट्रयाक बजाएर गाउनु भनेको रोबोट गायन हो,’ उनले स्विकारे, ‘त्यसमा फिलिङ हुँदैन । संगीत भावना हो । ट्रयाकले भावना मार्छ । तर, हामीकहाँ गीतको भावना बुझ्ने, यसलाई क्रिटिकल्ली सुन्ने श्रोताको संख्या न्यून छ । यहाँ रियल संगीत प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि मनोरञ्जन दिलाउनपट्टि ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ मौका मिल्दा आफूले ‘जात्रा’ लाई ब्याक अप ब्यान्डका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रम आयोजक सतर्क भइदिए संगीतबाट ‘पेन ड्राइभ कल्चर’ हट्ने दीपको ठम्याइ छ । उनका अनुसार, संगीतकर्मीले पनि पहल गर्न उत्तिकै जरुरी छ । मिलनहरू चाहिँ सानो बजारमा धेरै माग गर्न नसकिने गुनासो गर्छन् । दीपले भने, ‘ट्रयाक मात्रै होइन, पूरा गीतै बजाएर लिप सिंक गरेको पनि देख्छु । आर्टिस्टहरू अधीर भए । हुन त यसरी नै कति जना सर्भाइभ भइरहेका छन्, तर कलाकारले कलाको सम्मान त गर्नुपर्‍यो नि †’ उनी वाद्यवादक लग्न नसके कम्तीमा आफैंले पनि गितार वा हार्मोनियम बजाउँदै गाए संगीतको शालीनता झल्किने बताउँछन् ।
मल्टिट्रयाक रेकर्डिङ सुरु भएयता स्टेजमा पनि ट्रयाक सिस्टम चालू भएको संगीत संयोजक फणीन्द्र राईको बुझाइ छ । पहिले पहिले अग्रज गायकगायिकाका कन्सर्ट हुँदा उनी गितार बजाउन जान्थे । त्यो बेला ट्रयाकको चलन नभएको उनी सम्झिन्छन् । ‘लाइभ वाद्यवादन र रेकर्डेड ट्रयाकको साउन्ड क्वालिटीमा आकाशपातालको फरक पर्छ,’ उनले भने, ‘लाइभ धेरै स्तरीय हुन्छ, गायकलाई फरकफरक तरिकाले गाउने सुविधा हुन्छ । ट्रयाकले बाँध्छ, ऊ सँगसँगै दौडिएन भने प्रस्तुति बिग्रिन्छ ।’
पेन ड्राइभ आउनुअघि सीडीमा ट्रयाक बोकेर हिँड्ने गरेको गायकगायिका सम्झिन्छन् । आफूले ट्रयाकमा गाइदिनाले वाद्यवादकको जागिर खोसिएको भन्दै मिलनले दु:ख व्यक्त गरिन् । दीपलाई पनि ट्रयाक सिस्टमले वाद्यवादकको मानहानि गरेको आभास हुन्छ । धीरज भने अब यो चलन हराउनेमा आशावादी देखिए । ‘स्कुल/कलेजतिरका कन्सर्टमा ब्यान्डको माग हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्तामा सांगीतिक चेत छ । आयोजकले अब हामीलाई एक्लै बोलाएर दर्शकलाई खुसी दिलाउन सक्दैनन् ।’
‘र’ को सट्टा ‘स्याम्पल’
कन्सर्टको कुरा मात्र होइन, रेकर्डिङदेखि नै संगीतमा ‘र’ साउन्ड राख्न छोडिएको छ । पर्पल स्टुडियोका संगीत संयोजक फणीन्द्र राईका अनुसार, अचेल गीतमा लाइभ म्युजिक राख्नेभन्दा स्याम्पल म्युजिक राख्ने धेरै हुन्छन् । संगीतको पाइरेसी रोक्नुपर्छ भन्नेहरू नै इन्टरनेटबाट पाइरेटेड साउन्ड स्याम्पल डाउनलोड गरेर गीतमा भर्छन् । यसरी नि:शुल्क भेटिने ध्वनि मिसाउँदा लाइभ म्युजिक रेकर्डिङको खर्च बच्छ ।
डोरेमी स्टुडियोका संगीत संयोजक गोपाल रसाइली पनि स्याम्पल साउन्ड प्रयोग गर्छन् । तर, आफूले किनेर मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रा रेकर्डिङ इन्ट्रुमेन्ट स्तरीय छैनन्,’ उनले भने, ‘विदेशमा प्रत्येक बाजाका लागि आआफ्नै शैलीका महँगा माइक हुन्छन् । तीबाट रेकर्ड भएको धुन एकदम सफा हुन्छ । म कहिलेकाहीँ त्यस्ता धुन किन्छु ।’ बाँसुरी, सारंगी, मादल, ढोलकजस्ता नेपाली मौलिक बाजाचाहिँ रेकर्ड गरेर डिजिटल अडियो वर्कस्टेसन (ड) मार्फत रिफाइन गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । यो सफ्टवेयरमा प्रत्येक बाजाको धुन केलाएर अन्तमा गीति लय तयार पारिन्छ ।
नेपाली गीतको साउन्ड क्वालिटी सुधार्न रेकर्डिङ स्टुडियो र त्यहाँका उपकरणको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको रसाइली औँल्याउँछन् । यसो गर्दा खर्च बढे पनि राम्रो उत्पादन आउने उनको भनाइ छ । ‘एउटा गीतको स्टुडियो खर्च अहिले बढीमा १५ हजार छ,’ फणीन्द्रले भने, ‘अरेन्जमेन्टसमेत जोडदा २५–३० हजार पर्ला । लाइभ म्युजिक राख्यो भने न्यूनतम ३५–४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’
कन्सर्टमा स्टुडियो साउन्ड सुहाउँदैन भनेर ट्रयाकमा प्रस्तुति नदिने ‘दुर्लभ’ गायकगायिका पनि हामीकहाँ छन् । तीमध्येका एक हुन् गायक नवीन के भट्टराई । हाल कन्सर्टका लागि सिक्किम पुगेका उनी ‘अतृप्त’ ब्यान्डसहित त्यहाँ छन् । ‘आउने भए ब्यान्डसहित आउँछु नभए आउँदिनँ भन्ने गरेको छु,’ गायकले फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत कान्तिपुरसँग भने, ‘एक्लै गाउँदा गीतको आत्मा मर्छ । ट्रयाक त स्टुडियोको उत्पादन हो ।
लाइभ गायनमा दर्शकलाई रियल टाइम म्युजिक सुनाउनुपर्छ ।’
अर्का गायक दीपक बज्राचार्य पनि सोलो प्रस्तुति दिँदैनन् । उनको ब्यान्ड नै छ, ‘द रिदम’ । पछिल्लो पटक सबिन राईले एक्लै गाउन छोडेका छन् । उनी ‘द फाराओ’ ब्यान्डसँग उपस्थित हुन्छन् । ‘१९७४ एडी’ बाट अलग्गिएपछि एड्रियन प्रधान र फिरोज स्याङदेनले ‘फ्रेन्ड्ज’ ब्यान्डलाई ब्याकअपमा राख्ने गरेका छन् ।
‘ब्यान्डसहित कार्यक्रम गर्दा महँगो पर्छ भन्नेहरू पनि छन्,’ नवीनले भने, ‘तर, सस्तोका लागि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ ।’
प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:५७
काठमाडौँ — उत्तरी छिमेकी चीन वस्तु उत्पादन र बिक्रीमा मात्रै अग्रणी छैन । उसले आफ्नो सांस्कृतिक परिधि पनि विस्तार गर्न थालेको छ । हुन त चिनियाँ फिल्महरू यसअघि नै विश्वभर लोकप्रिय थिए, तर अब चिनियाँ नाटकको पनि बजार बढाउन थालिएको छ ।
‘ड्रिम अफ द रेड च्याम्बर’ ओपेराको एउटा दृश्य ।
बेइजिङ बस्दै आएका क्यानाडेली शास्त्रीय संगीत संयोजक रे आर्मस्ट्रङ चिनियाँ संस्कृतिबाट खुब प्रभावित छन् । उनले हालै चीनमा प्रदर्शन गरिएको ‘ड्रिम अफ द रेड च्याम्बर’ ओपेरालाई युरोप लग्ने भएका छन् । चिनियाँ उपन्यासमा आधारित यस्ता प्रदर्शन कलाहरू कसरी विदेशसम्म पुगिरहेका छन् भन्नेबारे पछिल्लो समय निकै समाचार देख्न पाइन्छ ।
आर्मस्ट्रङले चिनियाँ संस्कृतिको प्रचार गर्न यो माध्यम उचित हुने बताएका छन् । यसबारे राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई जानकारी गराइसकेका उनले स्थानीय पत्रिकालाई भनेका छन्, ‘उहाँ संस्कृति र सफ्ट पावर सम्बन्धमा निकै कडा हुनुहुन्छ । गत अक्टोबरमा भएको कम्प्युनिस्ट पार्टीको १९ औं साधारणसभामा यसबारे बोल्नुभएको थियो । हामी चिनियाँ संस्कृति युरोप लग्न पहल गरिरहेका छौं ।’
बेइजिङस्थित नर्थ पिनगड आर्ट कम्युनिटीको कार्यालयमा बसेर आर्मस्ट्रङले आफ्ना कुरा चाइना डेलीलाई सुनाएका थिए । उनीछेउ बडेमानको आकर्षक टेबल थियो । सय वर्ष पुरानो चिनियाँ परम्परागत ढोकालाई टेबलको रूप दिएर सिसाले बलियो पारिएको थियो । ‘यो मैले काओबेडियन जिल्लाका काष्ठकर्मीलाई बनाउन लगाएको थिएँ,’ आर्मस्ट्रङले भने, ‘त्यहीँबाट हामी नाटकलाई चाहिने सरसामान पनि भेला पार्छौं ।’
यी ६७ वर्षे क्यानाडेलीले २००९ मा बेइजिङमा आर्मस्ट्रङ म्युजिक एन्ड आर्ट नामक संस्था खोलेका थिए । ‘ड्रिम अफ द रेड च्याम्बर’ लाई उनको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम मानिएको छ । यसमा चिनियाँ मूलका अमेरिकी आर्टिस्ट ब्राइट सेङले संगीत र्सिजना गरेका थिए भने डेभिड हेनरी वाङको पटकथामा ओपेरा तयार पारिएको थियो । सेङ र वाङ अमेरिकामै रहेर चिनियाँ भावबाट प्रभावित सांस्कृतिक कला उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । ‘खासमा यो ओपेरा चिनियाँ बजारका लागि निर्माण भएकै थिएन,’ आर्मस्ट्रङले भनेका छन्, ‘तर, सान फ्रान्सिस्को ओपेराले सहयोग गर्ने भएपछि यतै देखाउनुपर्ने भयो ।’ अमेरिकी उत्पादन भए पनि चिनियाँ कलाकार समावेश गरिएको छ ।
कपितय विदेशी विज्ञका अनुसार चीनले फिल्मलाई पनि सफ्ट पावरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । स्थानीय भाषा र संस्कृति त्याग्ने हो भने चिनियाँ फिल्मले हलिउडलाई पाखा लगाउने युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका स्टान्ली रोजेनले बताएका छन् । ‘फाइन्डिङ मिस्टर राइट’, ‘स्लिपलेस इन सियाटल’, ‘टाइनी टाइम्स’ जस्ता फिल्म चीन छोड्न सफल भएका थिए ।
पपुलर कल्चर मात्र नभएर मौलिक चिनियाँ संस्कृतिको प्रचारमा सी सरकार बढी सचेत भएको अनुमान गरिएको छ । आफूले तयार पारेको ओपेराले चीन र पश्चिमेली अर्केस्ट्राबीचको दूरी घटाउन मद्दत गर्ने भएकाले सरकार लचिलो भएको आर्मस्ट्रङको बुझाइ छ । ‘जापानी कलाकारले झैं चिनियाँले पनि पश्चिमा संगीतकर्मीसँगको ग्याप मेटाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई युरोप पुर्‍याउनु मेरो सपना हो ।’
चीनमा संगीतकर्मीको खडेरी पर्न थालेको बताइन्छ । त्यहाँका युवायुवतीहरू अमेरिका, बेलायत र जर्मनी गएर संगीत अभ्यास गर्ने गर्छन् । यसले पनि परोक्ष रूपमा चिनियाँ संस्कार प्रचारमा सहयोग गरेकै छ ।
प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:५६